Nwanyi Hormones ntụ ntụ usoro suppliers - AASraw ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Nwa nwanyi Hormones
Anyị bụ ndị inyom Hormones, ndị inyom Hormones ntụ ntụ maka ire ere, Dịka anyị kwere nkwa, anyị niile Hormones ntụ ntụ na-adị ọcha bụghị ihe na-erughị 98%.
Nwanyi Hormones ntụ ntụ
Hormones nwere ọtụtụ mmetụta dị mkpa na ahụ ike ụmụ nwanyị. A na-amata nke ọma na hormones ndị inyom, estrogen na progesterone, bụ ndị a maara nke ọma n'ihi na ha na-enwe mmetụta n'ahụ ike nwanyi, site na nsọ nwanyị ruo ime ime na mụọ ndị nwoke na ndị ọzọ. Ma ahụ gị na-ejikwa ọtụtụ homonụ ndị ọzọ na-emetụta akụkụ ndị ọzọ nke ahụike gị-site na ike gị, ịdị arọ, ọnọdụ gị na ọtụtụ ndị ọzọ. A na-eme mgbanwe dịgasị iche iche n'ime afọ ndị na-eduga na menopause (perimenopause) site na agbanwe agbanwe nke homonụ nke ovaries na-emepụta, nke bụ etrogen.
Ọ dịwo anya echere na ọkpụkpụ azụ nke ụmụ amụrụ ọhụrụ sitere na hormones nke nwanyi (ntụ oestrogens) n'ime nne nne na-agafere placenta n'oge ime ime na ịme nwa ara na-akpali akpali.
Ihe kachasị mkpa homonụ nke ovaries na-eme ka a mara dị ka hormones na-ahụ maka mmekọahụ (ndị nwoke na-ahụ maka mmekọahụ) - na isi abụọ bụ estrogen na progesterone. Ndị ovaries na-emepụta ụfọdụ n'ime hormone nwoke, testosterone.
Mgbe ọ na-etolite, estrogen na-eme ka ọkpụkpụ ara na-eme ka ọkpụkpụ, akpanwa (akpa nwa) na akpa Fallopian (nke na-ebu nsen na akpa nwa) iji tozuo oke.
Ọ na-ekerekwa òkè n'uto ahụ na-emegharị ma na-agbanwe nkesa abụba n'anụ ahụ nwa, nke na-eme ka a na-etinyekwu ihe dị gburugburu azụ, ọkpọ na apata ụkwụ. Testosterone na-enyere aka n'ịkwalite ahụ ike na ọkpụkpụ.
Estrogen. Dị ka "hormone" bụ isi bụ isi, estrogen na-akwalite uto na ahụike nke akụkụ ụmụ nwanyị na-amụpụta ma na-eme ka ikuku hichaa, na-agbanwe (stretchy), ma nye ya ọbara. Ọdịdị nke etiti nke Estrogen na-ajụkarị n'oge perimenopause, ma ha na-eme ya n'oge ejiji. Mgbe ufodu, enwere ike inwe estrogen karia mgbe o na-eme ihe karia n'oge gara aga.
Na mgbakwunye na estrogen, ọkwa nke homonụ ndị ọzọ nke ovaries-progesterone (hormone ndị ọzọ) na testosterone (a na-emepụta hormone nwoke na-emepụta na ọkwa dị ala karịa ụmụ nwanyị) - na-agbanwe kwa n'oge afọ ole na ole, dị ka akọwawara na tebụl n'okpuru.
Mbelata nke na-agbada na progesterone na-emetụta oge nwoke na nwanyị karịa ka ha na-emetụta ọrụ mmekọahụ, ma ịdaba nke afọ na testosterone nwere ike ịkụda libido (mmekọahụ drive) n'etiti ụmụ nwanyị etiti, ọ bụ ezie na nke a ka na-arụ ụka. Eziokwu ahụ bụ estrogen na-ebelata ihe karịrị testosterone na-eduga ụfọdụ ka ha kwenyere na libido ekwesịghị ịla azụ na mụọ ndị nwoke. Mbelata nke testosterone na ụmụ nwanyị bụ nanị afọ, ọ bụghị nke ndị mmadụ na-eme, na-amalite afọ ole na ole tupu ha amalite.
Estradiol ntụ ntụ (E2), nke sụgharịrị ịbụ oestradiol, bụ estrogen steroid hormonone na isi nwanyị na-enwe mmekọahụ. Ọ na-agụnye ụkpụrụ nke usoro ọmụmụ ọmụmụ nwa nwanyi na-achọsi ike. Estradiol ntụ ntụ bụ maka mmepe nke mmekorita nke nwanyi dịka ara, ịbawanye ọkụ, na usoro nwanyi nke oke na-ekesa ụmụ nwanyị na ọ dị mkpa na mmepe na nlekota nke mmepụta ụmụ nwanyị dika mammary glands, akpanwa , na ikpu mgbe ọ bụ nwata, ogo mmadụ, na afọ ime. O nwekwara mmetụta dị mkpa n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ gụnyere ọkpụkpụ, abụba, akpụkpọ, imeju, na ụbụrụ.
AASraw na-enyepụta raw powders nke ntụsara estradiol, ntụ ntụ estradiol Benzoate, estradiol powder valerate, ethinyl estradiol ntụ ntụ, wdg. Ha niile bụ ndị e ji n'aka maka ịdị ọcha, mma na anụ siri ike.
Na-egosi 1-8 nke 20 results
Gosi 8 Ngwaahịa
Gosi 24 Ngwaahịa
Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
17-Hydroxyprogesterone na-ekpuchi ntụ ntụ
Allylestrenol ntụ ntụ (432-60-0)
Delmadinone Acetate ntụ ntụ
Desogestrel powder (54024-22-5)
Fọl Gestodene (60282-87-3)
Boldenone Acetate ntụ ntụ
Ethisterone ntụ (434-03-7)
Bromelain ntụ ntụ
Sunifiram (DM235) ntụ ntụ